Maro ireo toerana anaovana ny adina ara-panantanjahatena BEPC, saingy raha ny andron’ny 30 jolay, naresaka Mahamasina. Nitombo ny isan’ny mpianatra hanala fanadinana Bepc niatrika ny adina ara-panatanjahantena tamin’ity taona ity. Tahaka ny fanadinana rehetra ny adina ara-panatanjahan-tena ka tsy maintsy misy foana ny tahotra kely ho an’ireo mpiadina.
Hery lehibe ho an’ny mpiadina anefa ny mahita ny ray aman-drenin’izy ireo manaraka sy manotrona azy ireo hiatrika ny fanadinana. Mitebiteby lavitra noho ireo mpiadina koa anefa ireo ray aman-dreny.
Ho an’ireo mpiadina nangataka ny Lycée Jules Ferry Faravohitra ho lisea hidirana, niampy 160 ireo mpiadina tamin’ity taona 2019 ity ka tafiakatra 460 hatramin’ny 480 ny isan’ireo mpiadina miatrika ny adina ara-panatanjahan-tena isan’andro.
Tsy ilaozan’ny olana mitranga ny fanadinana tahaka izao toy ny fanadinoana na fahaverezan’ny karatra maha mpianatra na ihany koa ny taratasy fiantsoana. Ahitan’ny tomponandraikitra vahaolana foana anefa izany ka tsy hatao ho sakana tsy hiatrehan’ny ankizy ny fanadinana. Ny 19 hatramin’ny 30 Aogositra ho avy izao kosa no hanomboka ny fanadinana ara-panatanjahan-tena baccalauréat ho an’ny eto Antananarivo sy ny manodidina.